Lasers-Pointers.com | Mividiana Manga, Mena, Violet, Pointer Maintso Maintso
MPIASA BOKY BLUE
HEVITRA LASA INDRINDRA
LOHATENY VIOLETO LASERS
RED LASERS POED
ACCESORIES LASERS POINA
Toro-marika Laser 100mW
Hita amin'ny maitso (532nm), mena (650nm) ary Violet (405nm).
Mahatratra hatramin'ny 4 km. Afaka mandoro fitaovana mainty hoditra isan-karazany, kitapo fako, na balaonina aza mety hipoaka izy ireo.
Arosoy amin'ny fampiasana sporadic na anatiny (famelabelarana, kilasy ...).
Mahatratra hatramin'ny 8 km. Afaka mandoro fitaovana miloko mainty toy ny kitapo fako ary mipoaka ny balaonina.
Arosoy amin'ny fizarana teleskopika, fanaraha-maso amin'ny radio, tripods sary ...
Mahatratra hatramin'ny 12 km. Afaka mandoro fitaovana isan-karazany izy ireo noho ny fokalony izay ahafahan'ny mifantoka sy manova ny haben'ny vondrom-boany: ny plastika, ny baoritra, ny fipoahana balaonina, ny fampirehitra lalao.
Arosoy amin'ny fampiasana ivelany, manondro kintana, mametraka jiro amin'ny sary amin'ny alina sy fanandramana isan-karazany.
Toro-marika Laser 500mW
Mahatratra hatramin'ny 20 km. Afaka mandoro fitaovana isan-karazany izy ireo noho ny fokalony izay ahafahan'ny mifantoka sy manova ny haben'ny vondrom-boany: ny plastika, baoritra, lamba, fipoaka balaonina, fampifangaroana lalao.
Arosoy amin'ny astronomia, sary amin'ny alina, fampisehoana an-tsary, signage ary fanandramana.
Hita amin'ny Blue (445nm).
Mahatratra hatramin'ny 30 km. Afaka mandoro haingana ny karazan-java-fitaovana rehetra izy ireo ary amin'ny elanelana lavitra noho ny fifantohany izay mamela ny fifantohana sy ny fanovana ny haben'ny vatan-kazo: plastika, lamba, baoritra, taratasy, lalao, lalao, kitay.
Arosoy amin'ny astronomia, sary amin'ny alina, fampisehoana an-tsary, signage, fanandramana ...
Tondro manga laser
Ireo fantsona maintso maitso
Laser pointers Lasitera
Mena Lasers mena
MBOLA TOA RANO AO ANAO
HARENA INDRINDRA sy fahamendrehana
Lasers-Pointers.com dia orinasa iray miasa mivantana amin'ny orinasa mpanoro tarika laser maneran-tany, mamela antsika hanolotra ny laser mahery indrindra amin'ny vidiny mora indrindra.
+ Fanondroana Lasera 1000mW
Fahombiazana! Nampiana tao amin'ny lisitry ny mailaka izahay.
Manaiky aho Politika fiarovana fiainan'olona.